वीरबहादुर राई | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता वीरबहादुर राई
प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ” – वीरबहादुर राई
रजिष्ट्रार, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय
तिलिपि अधिकार संरक्षणका विषयमा देखिएका समस्याहरू केके हुन् ?
यसलाई प्राविधिक, आन्तरिक र बाह्य रूपमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकास भएको संरचना, कानून कार्यान्वयनको अवस्था, जनचेतनाको कुरा र विज्ञान प्रविधिका कारणले गर्दा समस्या देखिएका छन् । पहिले क्यासेट र सीडीको विक्री हुन्थ्यो भने अहिले पेन ड्राइभमा गीतसङ्गीतको प्रयोग हुन्छ । अहिले क्यासेट र सीडी विस्थापित हुने अवस्था आएको छ । अर्को समस्या के हो भने विश्वव्यापीकरणका कारणले नयाँनयाँ प्रविधिहरू भित्रिएका छन् । यसले आन्तरिक कुरालाई ओझेलमा पारेको छ । प्रतिलिपि अधिकारको कुरा गर्दा सङ्गीत सबैले बुझ्ने र सबैले सुन्ने कारणले गर्दा यसको महइभ्व बढेको र चर्चामा आएको हो । यसबाहेक फिल्म, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कला र फोटोजन्य वस्तुहरूका पनि प्रतिलिपि अधिकार हनन भएका छन् । यी विषयमा अहिले प्रविधिकै कारण मुख्य समस्या आएको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण हुन नसक्नु र प्रविधिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा कहाँनिर कमजोरी भइरहेको छ ?
यही पाटोलाई महत्वपूर्ण रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । हामीले केही समय अगाडिदेखि यसको व्यवस्थापनको पाटोलाई बढी ध्यान दिन थालेका छौँ । प्रविधिको त सधैँ विकास हुदै जान्छ । तर, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । अहिले सङ्गीत उद्योग सङ्घ छ । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज छ । नेपाल गायन समाज छ । उनीहरू पनि चासोका साथ यही विषयमा लागिरहेका छन् । ‘पेन ड्राइभ’ र ‘इण्टरनेट’ आइसक्यो । यस्ता प्रविधिलाई विस्थापन गर्न सकिँदैन । तर, व्यवस्थापन गर्न भने सकिन्छ । यसको नियन्त्रणको पाटो पनि सँगसँगै आउँछ । प्रतिलिपि अधिकार हननका विषयमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलको सहयोगमा अदालतमा जाने जुन प्रावधान छ, यसअनुरूप काम पनि भइरहेको छ । यसले प्रभावकारी रूप लिन केही समय लाग्छ ।
यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो ?
नियन्त्रणको पाटोमा वकालत गर्ने हिसाबले प्रतिलिपि अधिकारको कार्यालयले नै काम गर्छ । विभिन्न तालीम र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने काम हाम्रो नै हो । तर, गएको चौमासिकमा यस्ता कुनै काम गर्न सकेका छैनौं । यसको कारण बजेट नहुनु नै हो । गत वर्षहामीले १२/१४ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका थियौँ । काठमाडौँमा भन्दा पनि मोफसलमा बढी कार्यक्रम गरेका छौं । किनभने काठमाडौँमा प्रतिलिपि अधिकारका बारेमा केही न केही बुझेका मानिसहरू छन् । मोफसलमा छैनन् । यसका साथै तालीमले पनि सशक्तीकरण गर्नुपर्छ भनेर यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने नेपाल प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, भन्सारलगायतलाई समावेश गरेर तालीम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । किनभने प्रतिलिपि अधिकारको विषय के हो ? यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदा यसको मर्म र उद्देश्यलाई उजागर गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि हाम्रो समन्वयकारी भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । किनभने, सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज र नेपाल गायन समाज स्वतन्त्र रूपले स्थापना भएका छन् । उनीहरूको काम भनेको यसमा भएका कमीकमजोरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने,रोयल्टी कसरी सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन गर्दा कुन कुन विधि अपनाउने, कसरी वितरण गर्ने, यसका लागि कुन प्रक्रिया अपनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । हामीले उहाँहरूले गरेको कामको एकातर्फाट सहयोगात्मक र अर्को तर्फबाट कहीँ गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यसलाई सच्याउने गरी काम गर्छौँ । यो हिसाबले कार्यान्वयनका लागि उहाँहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेर आउनुभएको छ । गत फागुनमा उहाँहरूले ‘टोकन मनी’को रूपमा रोयल्टी पनि वितरण गरी सक्नुभएको छ ।
सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै वटा संस्थाहरू भइसके, उनीहरूका लागि तपार्इंहरूको भूमिका नियमनकारी मात्र हुन्छ कि, समन्वयात्मक पनि हुन्छ ?
हामीसँग दर्ता भएका २ वटा संस्था छन् । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज र नेपाल गायन समाज । उहाँहरूको हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ, अन्यको पर्दैन । अरूसगँ सहकार्य गर्ने हो ।
सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज र नेपाल गायन समाजको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
धेरै हदसम्म सकारात्मक भूमिका पाएको छु । किनभने, गीतसङ्गीत भनेको हिजो सौखको विषय थियो भने आज बाँच्ने आधार बनेको छ । उहाँहरूले यसमा काम गर्नै पर्छ । स्रष्टाको कुरा सुन्नै पर्छ र उनीहरूको समस्यासमाधानका विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्य संस्थाहरूले सामाजिक संस्थाको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । हाम्रो कुरालाई पनि उहाँहरूले महत्व दिनुभएको छ । हामीले पनि उहाँहरूका समस्यालाई उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिएका छौँ ।
प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि सङ्गीत उत्पादक कम्पनीहरूको के भूमिका हुन्छ ?
यदि गीतकार, सङ्गीतकार र गायनका मान्छेहरू ती कम्पनीमा गएर उहाँहरूलाई गीत नदिने हो भने उहाँहरूको अर्थ छैन । त्यस हिसाबले पनि उहाँहरू बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । पहिले उहाहँ रूबीचमा केही विषयमा द्वन्द्व थियो । तर, अहिले उहाहरूले सबै संगै हिड्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझिसक्नुभएको छ । यस हिसाबले उहाँहरू अहिले सँगै सहकार्य गरिरहनुभएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो ।
बजारमा तपार्इंहरूको उपस्थिति प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
यसलाई हामी स्वीकार्छौं । किनभने, हामीसँग जम्मा ८ जना कर्मचारी छन् । हामी काठमाडौँ जाँदा कार्यालय खाली गरेर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले के भनेका छौं भने यो संस्थाको अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै महत्व छ । यसले गर्दा यो कार्यालयको स्तरोन्नति गरौँ भनेका छौँ । कम्तीमा पहिलो श्रेणीसरहको विभाग बनाऔं । यसको विधागत रूपमा हेर्ने कम्तीमा एकएक शाखा राखौँ पनि भनेका छौँ । यसका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पठाइसकेका छौं । अहिलेको अवस्थामा यति काम गर्नु पनि हामीले त गर्व नै ठानेका छौं । अहिलेसम्म हामी बजारमा दौडियौँ । अब सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज र नेपाल गायन समाज दौडिनुपर्छ । हामीले मन्त्रालयसँग यो कार्यकालमा कम्तीमा पनि एउटा पद्धतिको विकास गराइदिनुहोस् भनेका छौँ ।